Tag - သဘော
29.01.2018 12:24 Forexထရိတ်ဒင်းနှင့်ပက်သက်ပြီးပြောကြသည့်စကားများထဲမှ အပြောများဆုံး မဟုတ်မမှန်ယုံတမ်းစကား ၆ခု
Forexထရိတ်ဒင်းအကြောင်းပြောကြတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံး အမှားအများဆုံးအချက်တွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်.
forex ကုနျသှယျ သဘော ပညာရေး
04.05.2018 12:24 Forex အရောင်းအဝယ်အကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထိပ်တန်း စာအုပ် ၆၀
လူသစ်တွေကို အကူအညီဖြစ်စေရုံသာမက ကျွမ်းကျင်ရောင်းဝယ်သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရိပ်အမြွက်များပေးမည့် Forex အရောင်းအဝယ်အကြောင်း အကောင်းဆုံးစာအုပ်များကို သင်နှင့်အတူမျှဝေချင်ပါတယ်။ သင့်မိတ်ဆွေများနဲ့ ဝေမျှဖို့ မမေ့ပါ cutနဲ့! စာရေးသူများသည် အရောင်းအဝယ်ပေါ်တွင်…
20.07.2018 13:39 FOREX နှင့် မိန်းမပျို၊ အဆင့် ၁
FBSမှ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်: သူ့ဘဝမှာ တစ်မိနစ်လောက်တောင်မှ အရောင်းအဝယ်မလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးက Forexမှာ ငွေရှာချင်တယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စူးစမ်းနေမိကြပါတယ်? မစ္စအန်းမှ ဒီစမ်းသပ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပြီး၊…
forex ကုနျသှယျ သဘော ပညာရေး forex ပညာပေးသင်ကြားရေး
22.01.2018 08:19 မှတ်ဥာဏ်တုနည်းပညာတွေက ဈေးကွက်ကို ပြောင်းလဲလာစေမယ်
ထရိတ်ဒါများအပေါ်အများဆုံးသက်ရောက်မှုရှိမည့် အနာဂတ်တွင် AIမှတ်ဥာဏ်တုနည်းပညာက ယူဆောင်လာမည့်ပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး စောင့်ကြည့်လေ့လာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်.
15.09.2017 10:58 ဟောကိန်းတွေနဲ့ Forexကို ၇ရက်စာလောက် ကြိုပြီး ဟောကိန်းထုတ်နိုင်မလား?
ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင် ထရိတ်ဒါတွေကြားထဲ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် - တစ်ဖွဲ့က ဗေဒင်နက္ခတ်တွေနဲ့ Forexကို ခန့်မှန်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို ယုံတဲ့အဖွဲ့နဲ့ မယုံတဲ့ အဖွဲ့ဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
21.09.2017 08:27 Forex Factory ကို အသုံးပြုပြီး အောင်မြင်တဲ့ [Forex ထရိတ်ဒါ] တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.
သင်ဟာ အခုမှစပြီး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပြုလုပ်နေသူတစ်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Forex ထရိတ်ဒါ တစ်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ် ထရိတ်ဒင်းလုပ်ရာမှာ အမြင့်မားဆုံးသော အမြတ်ငွေရရှိဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ၂၉၆၂ဆိုဒ်မြောက် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဈေးကွက်အသိပညာ ဗဟုသုတတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်မှာ Forex Factory မှာ လေ့လာဖတ်ရှုလိုက်ပါ.
19.02.2018 08:21 ဗွီဒီယိုဂိမ်း နှင့် Forexထရိတ်ဒင်း
ဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့ Forexထရိတ်ဒင်းက ဘယ်ဟာက ပိုလွယ်မလဲ? မေးခွန်းက ခပ်ရိုးရိုးမေးထားပြီး အဖြေက ထင်သလောက်မလွယ်ဘဲ သေချာထိမိအောင် ဥပမာများများနဲ့ ရှင်းပြရမှာပါ.
23.04.2018 09:23 ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ဘာတွေဖြစ်လာလိမ့်မလဲ?
၂၀၁၇ အကုန်လောက်မှာ လူတိုင်း၊ စီးပွားရေးဈေးကွက်မှာ မရောင်းဝယ်ဘူးသေးတဲ့သူတွေတောင်မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး
သဘော bitcoin ဘလော့ချိန်း
10.08.2018 14:34 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ဒီတစ်ပတ် ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်များက ဈေးကွက်ကို လှုပ်ခတ်စေမလဲဆိုတာ သိချင်ပါသလား? နည်းပညာစုစည်းမှုများကို စိတ်ဝင်စားပါ
usd gbp eur သဘော try
29.12.2017 12:30 ဘယ်သူ့Forex trading အရောင်းအ၀ယ်စတိုင်က သင့်ပုံစံနဲ့လိုက်မလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်အောင်စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်မှာ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးလိုက်ပါ.
Forexဈေးကွက်ထဲတွင် စတင်ပြီးရောင်းဝယ်သူများ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများသည် ကံကောင်းပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် သူဋ္ဌေးဖြစ်ချမ်းသာဖို့အတွက် မျှော်လင့်ထားကြတာများပါတယ်…